Previous Article Ugo Ọlaedo Emerie Otú ha
Next Article Ugo Naijiria Efelie
Otú egwu bọọlụ ala anyị, Super Eagles, bụzi ndị kwụrụ dịka ndị nke atọ na mba Afrịka ka ha gbagochara were bụrụzıe ndị nke iri anọ na abụọ na mba ụwa niile dịka ndị òtù ahụ na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ n'ụwa niile, FIFA, wepụtara ka mba ọ bụla siri kwụrụ ụbọchị Tọzdee na nchịkọta ọnwa Maachị.
Ndị Super Eagles, bụ ndị burula iko Afrịka ugboro atọ, gbagoro dịka ha sụchara ndị Seychelles akwụ n'isi ma gwakwa mba Ijipt na dimkpa na ibe ya hà bụ n'okwu ọnụ na asọmpi ha sọrọ ịzụ ụka abụọ gara aga. Nke a meziri ha ji gbagolite n'etiti ha siri kwụrụ.
Otú egwu bọọlụ Senegal bụ ndị mbụ na Afrịka ebe ndị Tunisia na-achụ ha n'azụ. Morocco bụ ndị nke anọ na DR Congo bụ ndị nke ise mezuziri ohere ise nke mba Afrịka. E tinyere Ghana, nanị obodo ndị a bụ otu egwú bọọlụ siri Afrịka sonyere na ndị iri na ise bu ụzọ n'ụwa niile.
Ndị kacha were gbagolite n'ọnwa Maachị bụ Tanzania dịka ha gafere mba isii site n'ebe ha kwụbu. Ọ bụ nwa amadị Naijiria bụ Emmanuel Amuneke bụ onyeisi ha mere ha jiri were bụrụ ndị ga-esonye na iko Afrịka nke afọ a ka o mechara afọ iri atọ na iteghete ha etozughị maka ya bụ egwuregwu.
Dịka FIFA depụtara ya, Belgium ka nọ dịka ndị mbụ, France bụ ndị bụrụ iko mba ụwa n'afọ gara aga (puku abụọ na iri na asatọ) na-agba ndị nke abụọ ebe Brazil kwụrụ dịka ndị nke atọ. England gbagotara dịka na ndị nke anọ ka ha gafere mba Croatia bụzi ndị nke ise.